Na dia tsy be pitsiny fandevilevin'ny Mamitaka amin'ny fiteny, maro ny fiaraha-monina no tena fikarohana manisa fotsiny ny zavatra. Tamin'ny taona ny tahirin-kevitra goavana, mpikaroka no mahisa mihoatra noho ny hatramin'izay, nefa tsy midika izany hoe hatrany fikarohana tokony nifantoka tamin'ny fanisana bebe kokoa ny zavatra. Kosa, raha tiantsika ny hanao ny tsara fikarohana amin'ny angon-drakitra lehibe, dia mila manontany: Inona no zavatra mendrika ny manisa? Izany dia toa toy ny raharaha subjective tanteraka, fa misy lamina ankapobeny.
Matetika ireo mpianatra Ny fisiana ara-hanosika ny fikarohana amin'ny hoe: Handeha aho mba hanisa zavatra iray izay tsy nisy olona isaina teo aloha. , Ohatra, ny mpianatra iray dia mety hoe, maro ny olona efa nianatra mpifindra monina ary maro ny olona no nianatra kambana, fa tsy misy olona efa nianatra mpifindra monina kambana. Antony manosika ny tsy fisian'ny matetika dia tsy mitarika ho amin'ny fikarohana tsara. Mazava ho azy, dia mety ho antony tsara mba hianatra mpifindra monina kambana, fa ny zava-misy fa efa tsy nianatra teo anatrehan'i dia tsy midika fa tokony ho nianatra izao. Tsy nisy isaina ny isan'ny kofehy teo amin'ny karipetra ao amin'ny biraoko, nefa tsy midika avy hatrany fa ho tsara tetikasa fikarohana. Antony manosika ny tsy fisian'ny dia karazana toy ny hoe: jereo, misy lavaka eo any, ary aho handeha hiasa mafy mba hameno azy. Kanefa, tsy dia mila lavaka rehetra mba ho feno.
Fa tsy mandrisika ny tsy misy, heveriko fa tsara manisa Mitondra ny fikarohana ao amin'ny toe-javatra roa, raha ny fikarohana dia mahaliana, na zava-dehibe (na Ny tena tsara izy roa). Ohatra, nandrefesany ny tahan'ny tsy fananana asa no zava-dehibe ny, satria ny any famantarana ny toekarena izay fanapahan-kevitra politika mitarika. Amin'ny ankapobeny, ny olona manana fahatsapana tsara tarehy tsara izay zava-dehibe. Noho izany, tao amin'ny sisa amin'ity fizarana ity, handeha aho mba hanome ohatra telo izay Ny fisiana ara-mahaliana. Amin'ny tranga tsirairay, ny mpikaroka tsy nanisa napetrapetraka, fa izy ireo manisa amin'ny tena manokana izay nanambara toe-javatra manan-danja kokoa ny fomba fijery ho ankapobeny hevitra momba ny fomba rafitra ara-tsosialy ny asa. Amin'ny teny hafa, be dia be ny zavatra mahatonga ireo fanazaran-tena mahaliana Ny fisiana ara-manokana dia tsy ao amin'ny angon-drakitra mihitsy, tonga avy amin'ireo hevitra ankapobeny kokoa.
Ireto ambany ireto aho manolotra ohatra telo on: 1) ny miasa fitondran-tena ny mpamily fiarakaretsaka ao New York (sampana 2.4.1.1), 2) namana fananganana ny mpianatra (sampana 2.4.1.2) ary 3) haino aman-jery sosialy sivana fitondran-tena ny governemanta Shinoa (sampana 2.4.1.3). Inona ireo mizara ohatra dia mampiseho fa izy rehetra manisa lehibe angon-drakitra azo ampiasaina mba hitsapana teorika filazana mialoha. Amin'ny toe-javatra sasany, loharanom-baovao angon-drakitra lehibe manome fahafahana anao hanao izany Ny fisiana ara-somary mivantana (toy ny nitranga tamin'i New York Taxis). Amin'ny toe-javatra hafa, ny mpikaroka dia mila miatrika incompleteness amin'ny alalan'ny tahirin-kevitra miaraka Nampitambatra sy operationalizing teorika constructs (toy ny tamin'ny raharaha ny namana fananganana); ary amin'ny toe-javatra sasany ny mpikaroka dia mila observational hanangona ny tahirin-kevitra (toy ny ao amin'ny haino aman-jery sosialy raharaha ny sivana). Rehefa Manantena aho fa ireo maneho ohatra, ny mpikaroka izay afaka manontany fanontaniana mahaliana, angon-drakitra lehibe mihazona fampanantenana lehibe.